गर्मीमा रोम - उडानको फाइदा लिनुहोस् e० यूरो | यात्रा समाचार
यदि हामीaको लाग्छ भने एकल गन्तव्यहो, पक्कै धेरै दिमागमा आउँछन्। तर त्यहाँ एक छ, जो अक्सर दोहोरिन्छ। रोम सँधै उपलब्ध हुन्छ जब हामी संसार अन्वेषण गर्न बाहिर जान्छौं। किनभने प्रत्येक जो यसको भ्रमण गर्दछ एक भन्दा बढी अवसरहरूमा दोहोरिन्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि गर्मी को आगमन संग तपाईं इच्छा संग छोडिनेछ, तपाईं गलत थिए।
किनभने गर्मी मौसममा पनि प्रस्तावहरू देखा पर्दछ। सायद, एक प्राथमिकता, यो एक धेरै प्रभावशाली प्रस्ताव जस्तो लाग्न सक्छ, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि हामी जुलाई महिना को बारेमा कुरा गरिरहेछौं। उच्च मौसम पहिले नै चलिरहेको छ, त्यसैले यदि हामी यसको बारेमा सोच्छौं भने यो विचार गर्ने ठूलो अवसर हो। तिमीलाई लाग्दैन?
1 To० यूरोका लागि रोममा उडान गर्नुहोस्
2 रोममा केन्द्रीय र सस्तो होटल
3 दुई दिनमा रोममा के हेर्ने
To० यूरोका लागि रोममा उडान गर्नुहोस्
यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि यस जस्तो प्रस्तावहरू प्रायः धेरै दिनसम्म चल्दैन। त्यसैले यदि जुलाई महिना पहिले नै तपाईंको दिनहरू बिदा वा बिदाको पहिलो मध्ये एक हो भने, तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ रोममा उडान र केहि दिनको लागि ठाउँको आनन्द लिनुहोस्। अवश्य पनि, उडान प्रस्थान बार्सिलोनाबाट हो। यी सिधा उडानहरू हुन्, दुबै आउटबाउन्ड र इनबाउन्ड र July देखि5सम्म।
यात्राको अवधि १ घण्टा 1० मिनेट छ। यो दुई दिनको लागि मात्र हो, तपाईं एक हात सामान लिन सक्नुहुन्छ, जाँच नगरीकन र एक यूरो अधिक खर्च बिना। बोर्डि times् समयहरू उत्तम हुन्छन् ताकि हामी पूर्ण रूपमा आफ्नो बसाईको आनन्द उठाउन सक्दछौं। त्यसो भए, तपाईं जहाँ हेर्नुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन, यस किसिमको प्रस्तावले दुई पटक सोच्नु हुँदैन। के तपाईंले पहिले नै निर्णय लिइसक्नुभयो? ठीक छ, यसलाई बुक गर्नुहोस् अन्तिम समय.
रोममा केन्द्रीय र सस्तो होटल
डाउनटाउन क्षेत्रमा अवस्थित सबै त्यस्ताहरू, वा यो नजिक, हामी होटेलमा छोडिन्छौं, 'विला मोन्टे मारियो' भनिन्छ। यो भेटियो केन्द्रबाट kilometers किलोमिटर र Pantheon बाट 4,2..२ को बारेमा। यो क्लासिक र धार्मिक स्थान हो। तर कुनै श doubt्का बिना, यो दुई दिन खर्च गर्न सबै अतिरिक्त छ। यसको मूल्य? दुई रात को लागीe63 यूरो। कुनै श doubt्का बिना, यो विचार गर्न अर्को राम्रो विकल्प हो। ताकि तपाईं यसबाट भाग्नु हुँदैन, तपाईं यसलाई पाउनुहुनेछ Hotels.com.
दुई दिनमा रोममा के हेर्ने
बिहान सबेरै कुरा, तपाईं मेट्रो लिन र प्लाजा डे एस्पानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यसको पछि, तपाईं एक सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यावसायिक सडक मध्ये जारी गर्न सक्नुहुन्छ जुन यो हो, 'Via del Corso'। धेरै नजिक, तपाईं पहिले नै सधैं आश्चर्यको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, 'ट्रेवी फाउंटेन'। यदि तपाईं 'Via del Corso' का साथ फर्कनुभयो र 'Via de Pietra' को साथ जारी राख्नुभयो भने, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ Pantheon, केहि मिनेटमा।
एक शक बिना, 'भ्याटिकन' यो एक ठूलो बैठक पोइन्ट हो। यस क्षेत्रको आनन्द लिनको लागि, यो सधैं चाँडो पुग्न सल्लाह दिइन्छ। त्यहाँ पुग्नको लागि, तपाईं मेट्रो ओट्टाभियानोमा लिनुहुनेछ। त्यहाँ एक पटक, तपाईं 'प्लाजा डे स्यान पेड्रो' तिर लाग्नुहुनेछ। भेट्न नबिर्सनुहोस् 'सेन्ट पिटरको बेसिलिका'.
संग्रहालयहरूमा प्राय: त्यहाँ प्रवेश गर्न पर्याप्त रेखा हुन्छ, तर यदि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई रमाउन नहिचकिचाउनुहोस्। तर हामीसँग धेरै समय छैन, हामी 'पियाजा नवोना' को आनन्द लिन हामी अघि बढ्ने छौं। अर्को दिन, हामीले 'रोमन फोरम' हेर्नुपर्नेछ, र साथै 'कोलिजियम'। अवश्य पनि हामी 'प्यालाटाइन' माउन्ट बिर्सन सक्दैनौं। तपाईं यी ठाउँहरूका लागि संयुक्त टिकट किन्न सक्नुहुनेछ र यदि एकमा वेटिंग लाइन छ भने, तपाईं अर्को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
किनकि रोमलाई दुई चार दिनमा देख्दैछ, केहि समय छोटो छ। तर यदि हामी यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्छौं, हामी ती कुनाहरूलाई आनन्द लिन सक्षम हुनेछौं जसले यसलाई अद्वितीय बनाउँदछ। अन्तमा, हामी क्यापिटलिन हिल र 'प्लाजा क्याम्पिडोग्लियो' मा आइपुग्नेछौं। त्यहाँ हामी एक मूर्ति भेट्टाउनेछौं रोमुलस र रिमस.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » गर्मीमा रोम, उडानको फाइदा लिनुहोस् e० यूरोमा
सुटकेस बिना यात्रा गर्न कारणहरू
नोभेम्बरमा कहाँ यात्रा गर्ने